ဝါတွင်း၌ အာဝါဟ ဝိဝါဟလုပ်မရခြင်းအကြောင်း – Burmese.asia
Homepage / Knowledge / ဝါတွင်း၌ အာဝါဟ ဝိဝါဟလုပ်မရခြင်းအကြောင်း
ဝါတွင်း၌ အာဝါဟ ဝိဝါဟလုပ်မရခြင်းအကြောင်း
By Kyaw Htet AungPosted on August 3, 2020 August 3, 2020
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလများတွင် မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြသည့်အပြင် ခိုးရာလိုက်ခြင်း၊ နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းများပင် ပြုလုပ်ထားလေ့ မရှိကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဝါတွင်းကာလတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူကြပြီဆိုလျှင် ထိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူများကို ရစရာမရှိအောင် ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလတွင် အဘယ့်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းပါသနည်း။ ဤအမေးမှာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
မိမိကိုယ်တိုင်သည်ပင် ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို သိချင်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပေပြီ။ စာအုပ်စာပေများ အမြဲလိုလို ဖတ်ဖြစ်သော်လည်း ခိုင်လုံတိကျသော အကြောင်းပြချက်များကိုကား စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ မတွေ့ရှိခဲ့ရပေ။ အွန်လိုင်းသုံးသည့်အခါများတွင်လည်း မိမိထံသို့ ဤမေးခွန်းကို ခဏခဏ လာလာမေးလေ့ရှိကြသည်။ ဂဃနဏ မသိသောကြောင့် ကောင်းကောင်း ဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ ယခုအခါမှာတော့ မိမိ၏စိတ် ကျေနပ်ရသည်အထိ အဖြေကို သိခဲ့ရပေပြီ။ယနေ့မနက် ကိုးနာရီမှ ဆယ်နာရီအတန်းချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဒေသနာပြန့်ပွားရေးဌာနမှ ဆရာဦးခင်မောင်ညိုက ၎င်းပို့ချချက်တွင် ဤအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ပို့ချရှင်းပြခဲ့သည်။
ဝါတွင်းကာလ၌ မင်္ဂလာမဆောင်ခြင်းဟူသော အယူအဆသည် ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ဟောကြားခဲ့ပါသလော။ မဟောကြားခဲ့ပါ။ ဤအယူအဆသည် ဗြာဟ္မဏဝါဒ(ဟိန္ဒူဝါဒ)မှ ဆင်းသက်လာသော အယူအဆ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဗြာဟ္မဏဝါဒ၌ ဝေဒပညာရှင်တို့၏ လက်သုံးကျမ်းဖြစ်သော ရာဇမတ္တဏ်ကျမ်းဟူသည် ရှိ၏။ ဗြာဟ္မဏဝါဒတွင် “သုံးပါးဘုရားတစ်ဆူ”ဟူသော အဆိုသည်လည်း ရှိ၏။ ထိုသုံးပါးမှာ ဗြဟ္မာ၊ ဗိဿ နိုး၊ သျှီဝတို့ဖြစ်ကြပြီး ဗြဟ္မာ၏ ကြင်ယာတော်မှာ သူရဿ တီဖြစ်၍ ဗိဿ နိုး၏ ကြင်ယာတော်မှာ လက်ခ်ျမီးဖြစ်ကာ သျှီဝ၏ ကြင်ယာတော်မှာ ပါရာဝတီဖြစ်လေသည်။
ထိုသုံးပါးတွင် ကိုယ်ပိုင်တာဝန်များ အသီးသီးရှိကြပေသည်။ ဗြဟ္မာ၏တာဝန်မှာ ကမ္ဘာလောကကို ဖန်ဆင်းရခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိဿ နိုး၏တာဝန်မှာ ထိုဗြဟ္မာဖန်ဆင်းပြီးသော ကမ္ဘာလောကကြီးကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည့် တာဝန်ဖြစ်ကာ သျှီဝ၏ တာဝန်မှာ ထိုကမ္ဘာလောကရှိ လူသားများအား မကောင်းကျိုးများ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ဗိဿ နိုးကို နတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဟု သတ်မှတ်ကြပြီး သျှီဝကို နတ်ဆိုးမိစ္ဆာဖြစ်သည်ဟု ဗြာဟ္မဏတို့ သတ်မှတ်ကြသည်။ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်သော ဗိဿ နိုးသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်မှ တော်သလင်းလဆန်း(၁၂)ရက်အထိ အိပ်လေ့ရှိပြီး အိပ်ရသည်မှ ညောင်းလျှင် တစ်ဖက်စောင်းကာ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၂)ရက်အထိ လေးလလုံးလုံး အိပ်လေ့ရှိသည်။ မြန်မာတို့ ယူဆသော ဝါတွင်းသုံးလသည် ထိုဗိဿ နိုးအိပ်သော လေးလအတွင်းတွင် အကျုံးဝင်လေသည်။
ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဝါတွင်းကာလတွင် လူတို့ကို ကောင်းကျိုးများပေးတတ်သော ဗိဿ နိုးနတ်မင်းအိပ်ချိန်၌ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် နတ်ဆိုးမိစ္ဆာဖြစ်သော သျှီဝနတ်မင်း၏ အနှောက်အယှက်များကို ခံကြရမည့်ဘေးမှ စိုးရိမ်သောကြောင့် ဗိဿ နိုးနတ်မင်း အိပ်ချိန်ဖြစ်သော ဝါဆိုလဆန်း(၁၂)ရက်မှ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၂)ရက်ဟူသော လေးလ၌ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း အလေ့အထကို ရှောင်ကြဉ်ကြခြင်းကြောင်း ရာဇမတ္တဏ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အချို့သော မြန်မာတို့သည် ဗေဒင်၊ ယတြာများကို ယုံစားလေ့ရှိကြသည်။ ဗေဒင်ကျမ်းဂန်များသည် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များဖြစ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံ၌ မပါဝင်ပေ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗေဒင်ပညာရှင်တို့သည် ဟိန္ဒူ၊ ဗြာဟ္မဏတို့၏ ဝေဒကျမ်းများကို မှီငြမ်းကိုးကားပြီး ဟောပြောကြရသည်။
ထိုသို့ ဗြာဟ္မဏကျမ်းဂန်များကို မှီငြမ်း၍ ကိုးကားဟောပြောကြရာမှတစ်ဆင့် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွင်းသို့ “ဝါတွင်း၌ မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်း” ဟူသော အယူအဆသည် တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ဝါတွင်းကာလ၌ မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းဟူသော အယူအဆသည် ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ လာသော ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်။ ဗြာဟ္မဏစာပေကျမ်းဂန်တို့မှလာသော ဟိန္ဒူဝါဒပင် ဖြစ်ကြောင်း သိသာပေါ်လွင်ပေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွပ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် သူ၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်ကို (၁၃၀၄)ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း(၁၁)ရက်၊ (၆၊ ၉၊ ၁၉၄၂)၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဝါတွင်းကာလကြီးတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဝါတွင်းကာလ၌ “မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်း” ဟူသော အယူအဆသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဤသို့ရေးသားရခြင်းမှာ မြန်မာတို့၏ အယူအဆကို ပစ်ပယ်လို၍ ဝါတွင်းကာလ၌ မင်္ဂလာဆောင်စေကြရန်ဟု မရည်ရွယ်ပါ။ ဤအယူအဆ၏ မြစ်ဖျားခံရာ ဇစ်မြစ်ကို အမှန်အတိုင်း သိစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ ရေးသားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဘူတန်ရဲ့ မိခင် (သို့) ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး မိဖုရားအကြောင်း
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်တွေ ဖျောက်ထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတချို့
ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှကေို ဆှဲဆောငျတဲ့နရောတဈခုဖွဈတဲ့ နယူးဇီလနျနိုငျငံက ဘရာစီယာခွံစညျးရိုး
Previous post ဂူအတွင်းမှာ တရားအားထုတ်နေရင်း (၃ . ၈ . ၂၀၂၀) ရက်နေ့ က ပေးပို့လာတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ စာ
Next post ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနဲ့ ထိုင်းမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ စင်လာကူမုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန် မြန်မာကိုဝင်ရောက်